Savorovoro tao amin’ny FJKM Ambohijatovo fitiavana : nesorina ny mpitandrina, tsy nanaiky ny mpivavaka | NewsMada
Savorovoro tao amin’ny FJKM Ambohijatovo fitiavana : nesorina ny mpitandrina, tsy nanaiky ny mpivavaka
Nilanja sora-baventy ireo mpino, mangataka ny hijanonan’ny mpitandrina sy ny fanalana ireo biraom-piangonana. Raikitra ny savorovoro tao amin’ny FJKM Ambohijatovo Fitiavana, ny asabotsy teo. Voalaza fa noho ny tsy fitoviam-pitantanana eo amin’ ny biraom-piangonana sasany sy ny mpitandrina no antony, ka niafara tamin’ny fanalana ito farany.
Ny asabotsy hariva lasa teo, nidina teny Ambohijatovo ny solontena avy ao amin’ny synodam-paritany Antananarivo Andrefana (SPAA10), nitondra ny fanapahan-kevitra fa hosoloina ny mpitandrina amin’izao fotoana izao ary « délégué » ny hitazona ny andraikitra manomboka eto. Tsy mankasitraka izany, ka nitondra sora-baventy mba hitazomana ny mpitandrina ny mpino ary nangataka ny hanatrika ny fihaonana teo amin’ny biraom-piangonana sy ny synoda.
Siotsioka, tabataba no heno nameno ny fiangonana rehefa tsy nanaiky fa nisisika hiditra ny trano fiangonana ny rehetra. Nambaran’ny nanatri-maso fa nahatsiaro tsy salama ny mpitandrina ka safotra ary nentina nijery mpitsabo vokatry ny savorovoro niseho. Efa tsy nitarika ny fotoam-bavaka ny maraina sy antoandro intsony ny mpitandrina fa ny « délégué » no novantanin’ny mpino rehetra, omaly. Nisy ny rakitra avy amin’ny mpino nanatrika ny fotoana izay natolotra ny mpitandrina taorian’ny fidirana voalohany.
Ny 14 febroary 2016 no noraisin-tanana ny mpitandrina eo amin’ny FJKM Ambohijatovo Fitiavana. Herintaona aty aoriana, nosoloina izy vokatry ny disadisa teo aminy sy ny mpikambana sasany eo amin’ny biraom-piangonana.
Tao anatin’ny herintaona mahery, nitrangana disadisa ao amin’ny FJKM Ambohijatovo Fitiavana. Zavatra roa no ambaran’ny mpikambana ao amin’ny biraom-piangonana fa fototry ny olana ka nitarika ireto farany tsy nanaiky hiara-hiasa intsony amin’ny mpitandrina. Voalaza fa anisany ny tsy fitoviam-pitantanana teo aminy sy ny birao. « Mahitsy fiteny ny mpitandrina eto aminay ka mety manelingelina ny mpino sasany izany », hoy ny fanazavan’ny mpandray fanasan’ny Tompo iray ao amin’ny fiangonana. Nahavita betsaka ho an’ny fiangonana anefa izy raha tsy hiteny fotsiny ny fanitarana ny trano fiangonana sy fametrahana carreaux. Mbola misy ny asa hafa kasainy atao, nefa izao miseho izao ny savorovoro, araka ny nambarany ihany.
Hangataka fihaonana amin’ny tomponandraikitry ny synoda
Manoloana izay rehetra izay, sahiran-tsaina ireo mahatsiaro fa tokony tsy mbola noesorina amin’ny toerana ny mpitandrina satria tsy nisy ny hadisoana nataony. Ny vaovao ofisialy omena ny mpiara-mivavaka rehetra, nametra-pialana ny mpitandrina vokatry ny disadisa eo aminy sy ny mpikambana sasany eo amin’ny biraom-piangonana.
Tsy hijanona amin’izao fa hanao taratasy fangatahana fihaonana amin’ny tomponandraikitry ny synoda ny mpandray fanasan’ny Tompo hamosaka ny alahelon’izy ireo sy hijerena vahaolana hafa ankoatra ny fampiatoana ny mpitandrina.
Niezaka nanatona teny an-toerana ny mpanao gazety, omaly, nanangom-baovao fa sahirana tanteraka, satria voahidy vavahady raha vantany vao nikasa ny hitafa amin’ny mpitandrina.